Autopilot Dirk Fassbender Panther P3D
mubvunzo Autopilot Dirk Fassbender Panther P3D
1 gore 8 ago #737 by Pierre B
Ndakashanda muPerher (Copter) simulator development ne Prepar 3D 3.2 (ndege simulation software). Ndakaisa yekutanga ye Dirk Fassbender Autopilot uye zvakare inoshandiswa. Zvose zvakanga zvakanaka.
Ndinokwanisa kutyaira zvose zvigadziridzo zve modopilot neAppopilot module.
Asi zvino ndinoda kukurudzira Autopilot modes zvakananga muP3D. Handizivi kuti iri modhini inoshanda sei.
Apo ini ndatsvaga HC075DI_FSX_COUGAR_AUTOPILOT.zip Ndakaona mukati mukati maiva nefaira rainzi afcp.cfg. Pakati pefaira iyi pane codekeys yakasiyana yekukurudzira nzira dzakasiyana dze Autopilot.
Ndakaedza kugadzirisa zvigadziro zvemotopi ne codekeys zviri mufcp.cfg zvakananga muP3D asi hapana chakaipa.
Mumwe munhu ane pfungwa yekuita sei?
1 gore 7 ago #748 by Pierre B
Zvakaipa zvangu, ndinoda kuvhiringidza zvakasiyana-siyana autopilot mamiriro nemakwikwi ebhokisi asi kwete nemakadhi epakakosha.
Time chokusika peji: 0.740 mumasekonzi